Zava-maniry zavamaniry mananasy ho solon'ny solika | Fanavaozana maintso
Portillo Alemanina | | Biomassa
Androany, na eo aza ny fivoaran'ny angovo azo havaozina eran'izao tontolo izao, dia misy koa ny solika fôsily ny menaka io dia mbola iray amin'ireo loharano lehibe manerantany. Ny ankamaroan'ny singa ampiasaintsika isan'andro dia avy amin'ny solika. Ohatra, ny plastika, ny fanafody maro, ny trinket, ny solika sns. Avy amin'ny menaka izy ireo.
Noho io fampitaovana manan-danja io sy ny fampiasana isan-karazany dia mila mamakafaka ny solon'ny solika isika satria, araka ny fantatra, dia loharano tsy azo havaozina io ary manakaiky ny havizanana. Iray amin'ireo fomba hafa hitan'ny mpandraharaha ho solon'ny solika ny zavamaniry mananasy. Ahoana no fomba hanolo ny mananasy?
Esteban Bermúdez dia tanora mpanavao avy any Costa Rica ary mpiara-miasa amin'i Escoia. Ity dia orinasa iray mamorona tetik'asa vaovao samy hafa izay hamadihana ny sisan'ny fambolena mananasy ho vokatra avy amin'ny angovo azo havaozina. Ankoatry ny famokarana herinaratra, misy ihany koa ny fampiasana hafa izay efa nianarana ary mety ho, ohatra, ny fananganana biofuel, zezika ho an'ny fambolena na holatra azo hanina.
Ity tanora manavao ity dia nanadihady ny asan'i Amerika Afovoany ary nahita fa izy no mpamokatra mananasy lehibe indrindra eto an-tany, miaraka amin'ny mpiara-miasa aminy. Bjøorn Utgärd, namorona an'i Escoia izy ireo.
Ny foto-kevitra nanovozana aingam-panahy an'i Bermúdez dia ao toekarena boribory. Manome fotoana faharoa ho an'ireo sisa tavela amin'ireo voly mananasy. Afaka nanamboatra milina izy ireo mba hahafahana mitsabo ny biomassa ary amin'izany fomba izany dia afaka mampihena ny hamandoan'ny mololo izy ireo. Amin'izany no hanamorana ny fandringanana azy ireo. Mba hivoahana amin'ity hevitra ity dia nanomboka ny taona 2014 izy ireo mba hikaroka sy hitsidika ireo toeram-pambolena mananasy. Zavamaniry maherin'ny 43.000 hektara ny mananasy miteraka fako, azo ovaina ho angovo sy vokatra hafa.
Satria tsy maintsy havaozina ny tanimboly mananasy isaky ny roa taona noho ny antony famokarana, ny sisa tavela amin'ny mololo dia nofafazana herisetra sy famonoana bibikely, noho izany dia tsy maintsy nodorana izy ireo. Na izany aza, mitady mpandraharaha hafa ireto mpandraharaha ireto mba hampihenana ny fiantraikan'ny tontolo iainana sy mampitombo ny tombom-barotra.
Efa mandeha ny fanavaozana, noho izany dia mitoetra ihany fa amin'ny taona 2017 dia afaka manamboatra tobim-pitsaboana ho an'ny sisa tavela amin'ny mananasy izy ireo. Amin'izany fomba izany, a biorefiry ary ny loharano dia azo avy amin'ny fako.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Biomassa » Ny sisa tavela amin'ny mananasy dia soloina solika